Asomafo Nnwuma 10 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 10:1-48
Kornelio anisoadehu (1-8)
Petro anisoadehu a ɛfa mmoa a wɔn ho ntew ho no (9-16)
Petro kɔɔ Kornelio hɔ (17-33)
Petro kaa asɛmpa no kyerɛɛ Amanaman mufo (34-43)
“Onyankopɔn nyiyi nnipa mu” (34, 35)
Amanaman mufo nyaa honhom kronkron, na wɔbɔɔ wɔn asu (44-48)
10 Ná ɔbarima bi wɔ Kaesarea a ne din de Kornelio. Ná ɔyɛ ɔsraani panyin* wɔ nea wɔfrɛ no Italy asraafodɔm* no mu. 2 Ná ɔyɛ ɔbarima a ɔmfa ne som nni agoru, na na ɔne ne fifo nyinaa suro Onyankopɔn. Ɔyɛɛ nkurɔfo adɔe pii, na na ɔde nkotosrɛ kɔ Onyankopɔn anim daa. 3 Bɛyɛ dɔn a ɛto so akron*+ no, ohuu pefee wɔ anisoadehu mu sɛ Onyankopɔn bɔfo bi aba ne nkyɛn. Ɛnna ɔbɔfo no kae sɛ: “Kornelio!” 4 Kornelio hwɛɛ no dinn, na ehu kaa no ma obisae sɛ: “Me wura, ɛyɛ asɛm bɛn?” Na ɔbɔfo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Wo mpaebɔ ne w’adɔe adu Onyankopɔn anim,+ na ɔkae ne nyinaa. 5 Enti soma mmarima ma wɔnkɔ Yopa, na wɔnkɔfrɛ Simon a wɔfrɛ no Petro no mmra. 6 Saa ɔbarima yi akɔsoɛ obi a ne din de Simon. Ne fi wɔ mpoano, na ɔyɛ mmoa nhoma ho adwuma.”* 7 Bere a ɔbɔfo a ɔne Kornelio kasae no kɔe ara pɛ, Kornelio hwɛɛ n’asomfo mu frɛɛ ne nkoa baanu ne ɔsraani bi a osuro Onyankopɔn, 8 na ɔkaa biribiara kyerɛɛ wɔn, na ɔsomaa wɔn kɔɔ Yopa. 9 Bere a ade kyee a wɔnam ɔkwan so rekɔ na wɔreyɛ adu kurow no mu no, Petro kɔɔ ɔdan no atifi kɔbɔɔ mpae. Saa bere no, na ɛbɛyɛ dɔn a ɛto so asia.* 10 Afei ɔkɔm dee no paa, na na ɔpɛ sɛ odidi. Bere a wogu so reyɛ aduan no, onyaa anisoadehu bi.+ 11 Ohui sɛ ɔsoro abue, na biribi* resian te sɛ ntama kɛse bi a wokurakura anoano anan no regyaagyaa mu aba asaase so. 12 Ná mmoa nyinaa bi wom: Mmoa a wɔn nan yɛ anan, awɔ ne nketew,* ne ewim nnomaa. 13 Ɛnna nne bi ka kyerɛɛ no sɛ: “Petro, sɔre, kum bi na di!” 14 Nanso Petro kae sɛ: “Daabi, Awurade, efisɛ minnii biribiara a ɛho agu fĩ na ɛho ntew biara da.”+ 15 Na nne no ka kyerɛɛ no ne mprenu so sɛ: “Nneɛma a Onyankopɔn atew ho no, nka sɛ ɛho agu fĩ.” 16 Ɛnne no bae ne mprɛnsa so, na ntɛm ara na wɔfaa ade* no kɔɔ soro. 17 Na Petro yɛɛ basaa, na na ɔnte anisoadehu no ase. Saa bere no, na mmarima a Kornelio somaa wɔn no abisabisa Simon fi kwan, enti na wɔabegyina ɔpon no ano.+ 18 Na wɔteɛɛm bisae sɛ ebia Simon a wɔfrɛ no Petro no abɛsoɛ hɔ anaa. 19 Bere a Petro gu so redwinnwen anisoadehu no ho no, honhom no+ kae sɛ: “Hwɛ! Mmarima baasa bi rehwehwɛ wo. 20 Enti sɔre, si fam na wo ne wɔn nkɔ, mma w’adwene mu nnyɛ wo naa koraa, efisɛ me na mesomaa wɔn.” 21 Ɛnna Petro sii fam kɔɔ mmarima no nkyɛn kɔkae sɛ: “Hwɛ! mene nea morehwehwɛ no no. Dɛn na ɛma mobaa ha?” 22 Wɔkae sɛ: “Ɔbɔfo kronkron bi de Onyankopɔn akwankyerɛ maa ɔsraani panyin Kornelio,+ ɔtreneeni a osuro Onyankopɔn na Yuda man nyinaa bɔ no din pa no, sɛ ɔnsoma mmɛfa wo mmra ne fi, na ontie nea wowɔ ka.” 23 Enti ɔde wɔn baa mu, na ɔsom wɔn hɔho. Ade kyee no, ɔsɔre ne wɔn kɔe. Na anuanom a wofi Yopa no bi ne no kɔe. 24 Da a edi hɔ no, oduu Kaesarea. Ná Kornelio nso afrɛfrɛ n’abusuafo ne ne nnamfo paa abehyia retwɛn wɔn. 25 Bere a Petro reyɛ adu hɔ no, Kornelio kohyiaa no, na obuu nkotodwe kotow no. 26 Nanso Petro maa no so kae sɛ: “Sɔre; me nso meyɛ onipa te sɛ wo ara.”+ 27 Bere a ɔne no rebɔ nkɔmmɔ no, owuraa fie hɔ, na ohui sɛ nnipa bebree ahyiam. 28 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo ara munim paa sɛ mmara mma kwan sɛ Yudani ne ɔman foforo muni bɛbɔ anaasɛ ɔbɛbɛn no.+ Nanso Onyankopɔn akyerɛ me sɛ, ɛnsɛ sɛ meka kyerɛ onipa biara sɛ ne ho agu fĩ anaa ne ho ntew.+ 29 Ne saa nti, bere a wɔsoma bɛfrɛɛ me no, mampopo me ti koraa na mebae. Enti merebisa wo: Adɛn nti na wosoma bɛfrɛɛ me?” 30 Ɛnna Kornelio kae sɛ: “Nnanan ni, bɛyɛ saa bere yi ara, na merebɔ mpae wɔ dɔn a ɛto so akron* no mu wɔ me fi. Ɛnna ɔbarima bi a ɔhyɛ ataade hyɛnhyɛn begyinaa m’anim. 31 Na ɔkae sɛ: ‘Kornelio, Onyankopɔn atie wo mpaebɔ, na ɔkae w’adɔe. 32 Enti soma kɔ Yopa kɔfrɛ Simon a wɔfrɛ no Petro no. Saa ɔbarima yi akɔsoɛ obi a ne din de Simon. Ne fi wɔ mpoano, na ɔyɛ mmoa nhoma ho adwuma.’*+ 33 Enti ntɛm ara na mesoma baa wo nkyɛn, ɛnna wo nso woatie no aso pa mu aba ha yi. Enti seesei, yɛn nyinaa ahyiam Onyankopɔn anim sɛ yɛrebetie nea Yehowa* aka akyerɛ wo sɛ bɛka no nyinaa.” 34 Ɛnna Petro fii ase kasae. Ɔkae sɛ: “Afei na mahu paa sɛ Onyankopɔn nyiyi nnipa mu,+ 35 na mmom ɔman biara mu no, onipa a osuro no na ɔyɛ nea ɛteɛ no, ogye no tom.+ 36 Onyankopɔn de n’asɛm kɔmaa Israel mma, na ɔkaa asomdwoe+ a ɛnam Yesu Kristo so no ho asɛmpa kyerɛɛ wɔn. Asɛmpa no ne sɛ, Yesu ne nnipa nyinaa Awurade.+ 37 Munim nea wɔkaa ho asɛm wɔ Yudea nyinaa no, asɛm a efii ase wɔ Galilea+ bere a Yohane kaa asubɔ ho asɛm wiei no. 38 Asɛm no fa Yesu a ofi Nasaret no ho. Ɛne sɛ, Onyankopɔn de honhom kronkron+ ne tumi sraa no, na okyinkyin asaase no so yɛɛ papa, na ɔsaa wɔn a Ɔbonsam ahyɛ wɔn so nyinaa yare,+ efisɛ na Onyankopɔn ka ne ho.+ 39 Na nneɛma a ɔyɛe wɔ Yudafo nkurow mu ne Yerusalem nyinaa, yedi ho adanse; nanso wɔbɔɔ no asɛndua mu kum no. 40 Oyi na da a ɛto so abiɛsa no,+ Onyankopɔn nyan no, na ɔma oyii ne ho adi kyerɛɛ nnipa. 41 Ɛnyɛ nnipa nyinaa na oyii ne ho adi kyerɛɛ wɔn, na mmom oyii ne ho adi kyerɛɛ adansefo a Onyankopɔn adi kan ayi wɔn, kyerɛ sɛ, yɛn a yɛne no didi nomee wɔ ne wusɔre akyi no.+ 42 Afei nso, ɔhyɛɛ yɛn sɛ yɛmmɔ dawuru, na yenni adanse frenkyemm+ nkyerɛ ɔman no sɛ, oyi na Onyankopɔn ahyɛ sɛ ommu ateasefo ne awufo atɛn.+ 43 Ɔno na adiyifo no nyinaa di ne ho adanse+ sɛ, obiara a ogye no di no, ɔnam ne din so benya bɔnefakyɛ.”+ 44 Bere a Petro gu so reka nsɛm yi no, honhom kronkron baa wɔn a wɔretie asɛm no nyinaa so.+ 45 Na gyidifo* a wɔatwa wɔn twetia* a wɔne Petro bae no ho dwiriw wɔn, efisɛ wohwiee honhom kronkron dom akyɛde a wɔde ma kwa no guu amanaman mufo nso so. 46 Na wɔtee sɛ wɔreka kasa horow,* na wɔreyi Onyankopɔn ayɛ.+ Ɛnna Petro kae sɛ: 47 “Eyinom anya honhom kronkron sɛ yɛn ara, enti hena na obetumi asiw wɔn kwan sɛ yɛmmfa nsu mmmɔ wɔn asu?”+ 48 Ɛnna ɔkae sɛ wɔmmɔ wɔn asu wɔ Yesu Kristo din mu.+ Afei wɔsrɛɛ no sɛ onni nna kakra wɔ hɔ.
^ Anaa “ɔha so panyin.” Kyerɛ sɛ, asraafo 100 hyɛ n’ase.
^ Ɛyɛ Romafo asraafodɔm a wɔn dodow yɛ 600.
^ Anaa “ɔhyɛ mmoa nhoma aduru.”
^ Nt., “dadesɛn bi.”
^ Nt., “dadesɛn.”
^ Anaa “anokwafo.”
Asomafo Nnwuma 10